Maanguddoon Aanaa Ada'aa maaliif bakka awwaalchaa dhaban? - BBC News Afaan Oromoo
Maanguddoon Aanaa Ada'aa maaliif bakka awwaalchaa dhaban?
Madda suuraa, Fuula Galmoota Mantaa Waaqeeffannaa
Jiraataa Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ada'aa Bargaa Ganda Caancoo Birraatee kan turan maanguddoon gannaa 78 Obbo Abdiisaa Hinsarmuu Sanbata darbe boqotanillee lafa awwaalchaa argachuu hin dandeenye jedhan maatiin isaa.
"Abbaan kiyya erga waaqeeffataa ta'ee waggaa tokko guuteera."
"Sanbata galgala saatii lamatti kan inni boqote. Namni kun amantii kana hin hordofu waan ta'eef iddo kanatti awwaalamuu hin danda'u jedhanii nu dhorkan," jedha.
Erga dhorkamanii booda filannoo waan dhabaniif maatiin "oyiruu isaa irratti isa awwaalle" jechuun dubbata Sirneessaan.
Dura Taa'aan Waaldaa Waaqeffattootaa Godina Showaa Lixaa Obbo Fayyisaa Lammaa iddoo barsiisa Waaqeffannaafi awwaalchaa irra deddeebiin bulchiinsa aanaa gaafannullee deebii hin arganne jedhu.
"Akkaataa heerri biyya kanaa keyyata 27/1 nu deeggaruun, amantii tokkoof ulaagaa tajaajila awwalchaafi iddoon kadhannaa kennamuufi qaba kan jedhuun, qaama bulchiinsa aanaa, magaalaa gandaafi bulchiinsa lafaa gaafachaa turre."
"Xalayaa kana yoo xiqqaate marsaa lamaafi sadii deebisnee gaalchaa turre, furmaata garuu ni dhabne," jedhu Obbo Fayyisaa.
Aanaa Ada'aa Bargaa keessatti yoo xiqqaate galma shan qabaachuu kan dubbataan Obbo Fayyisaan ta'us garuu galma shanan kun lafa dhuunfaa amantichaas ta'e bakka awwaalchaa akka hin arganne himu.
Dhimma kanarratti BBC'n kan dubbise Bulchaan Aaanaa Ada'aa Bargaa Obbo Mootii Gammadaa garuu miseensi hordoftoota amantaa kanaa kan aanaa keenya keessa jiran keessa gaaffi kana kan nuuf dhiyeesse hin jiru jedhu.
Akkaataa heerrii jedhutti kana gaafachuuf mirga qabu kan jedhan Obbo Mootiin, "nuti kaleessumaa [Wiixata] dhageenye malee dursa wanti akkasii kan gaafatamee waan hin jiraanneef amma adeemsuma keessatti fala barbaadanii kannamuufiin dirqama ta'a," jedhu.
Barreessaafi Qorataan Seenaa Oromoo Obbo Dirribii Damisee gaaffiin iddoo amantaa Waaqeffannaa bara Maccaafi Tuulamaa irraa eegalee gaafatamaa turullee dhiibbaan sirnaa biyyattii keessa tureen didamaa yoona ga'eera jedhu.
"Irra deddebinee Waldaa Waqeeffataas dhaabuu, lafa awwalchaas gaafachuu, bakka galmaas gaafachuu bara 2004 irraa jalqabnee Waldaa Maccaafi Tulamaa keessatti waldaan waaqffataa ijaaramee, eeyyamallee fudhannee utuu ji'a lama hin guutiin 'wanti isin hojjatan wanta tokkummaa Itoophiyaaf hin tolledha' jedhanii nu harkatti cufan," jechuun Obbo Dirribiin BBCtti himaniiru.
"Ujuba jennee mogaafannee itti awwaallanna lafa nuu keennaa jennee gaafannee dadhabne," jechuun himu.
Wayita ammaa kanatti Oromoon aadaasaatti deebi'aa jira, keessattuu dargaggoonni amantii abbaa keenyaa jechuun Waaqeffannaatti deebi'aa wayita jiranitti rakkoon jiru xiyyeeffannaan itti kennamee hin furamu taanaa balaa baata jedhu Obbo Dirribii.
Dargagonni walitti dhufanii biyyaa kanaa lafa adda addaatti galma gara 300 ta'u qabu jedhu.
''Dargaggoonni maal akka ta'an hin beeknu, bayyee rakkisaadha. Mootummaan maaliif callisee akka ilaalu namaa hin galu," jedhu.
Namoota 10 waliin ta'uun kitaabaa Waaqeeffanaa bareessanii dhiyeenya ebbisiisuu isaanii Obbo Dirribiin ni dubbatu.
Barreefama kana qabachuun seeraa guutanii bakka itti galma ijaarratanis lafa awwaalchaas gaafataniis '' nama waraqaa eenyummaa gandaa qabu nama 1,000 fidaa malee kanaa achii siniif hin kenninu' deebii jedhu akka argatan BBCtti himaniiru.
Wiixata kana lafa awwaalcha kan dhaban Obbo Abdiisaan nama guddaa, nama raagee ta'uu dubbatu.
"Nama akka kanaa biyya abbaasaa keessatti bakka awwaalchaa dhowwuu jechuun seexaa akkami akka jiruufi mootummaanillee ija akkamiin akka ilaalu baayyee baayyee na gaddisiisa," jedhu